5 nin oo Bakistaaniyiin tabliiq ah oo lagu dilay masaajid ku yaalla Galkacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
Galkacyo, Aug 12 – 5 nin oo dhashay dalka Baakistaan oo ahaa wadaado Tabliiq ah ayaa saakay lagu dilay masaajid ku yaalla gudaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana isla weerarkaasi ku dhaawacmay sadex kale oo ka mid ahaa wadaadaasi oo mid ahaa Soomaali.
Dabley hubaysan oo aan wali haybtooda la garan ayaa soo weeraray Masaajidka oo ay wadaada Tabliiqu dhisteen isla markaana ay ku tukan jireen, waxayna kala soo baxeen masaajidka dhaxdiisa raggaasi xilli wax yar ka dhimmantahay tukashadii salaaddii subaxnimo, isla markaana waxay ku toogteen meel masaajidka dhiniciisa ah.
Masaajidka wadaada lagu laayey ayaa ku yaalla iskuulka ummada ee magaalada Galkacyo dhinciisa koonfureed.
Wadaada la laayey oo dhammaanyood ahaa Bakistaaniyiin Tabliiq ah ayaa soo gaaray gudaha magaalada Galkacyo maalin shalay ahayd iyagoo ka yimid dalka Baagistaan waxayna ahaayeen tiradoodu 10 nin sadexda bad-baadayna xilligii weerarku dhacay waxay ku jireen suuliyaasha qubayska ee masjidku uu lahaa.
Raggii dilkaasi ka danbeeyey ayaa baxsaday lamana garanayo halka ay ku danbeeyaan, waxaana dadkii masaajidka ku sugnaa ay sheegeen in ay u baxsadeen xagga koonfureed ee magaalada.
Isbitaalka Dhaga-cadda ayaa hadda lagu dabiibayaa labadii nine ee dhaawaca ahayd kuwaasi oo xaaladdoodu wanaagsan tahay sida uu Daljir u sheegay Dr Dhaga-cadde.
Dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa masaajidka xilligii weerarku dhacayey ayaa idaacadda Daljir u sheegay in ay mar kaliya ku warheleen al-baabada masaajidka oo ay soo galeen rag husayn oo dadka ku amrayey in aysan wax dhaq-dhaqaaq ah samayn.
Inkastoo goobta ay wax ka dhaceen ee wadaadada lagu laayey ay ahayd meel u dhaxaysa maamullada Puntland iyo Kan Gal-Mudug, haddana Ciidanka bileyska Puntlaand ayaa isku gadaamay goobtii ay wax ka dhacdeen waxaana socda baairitaanoo lagu ogaanayo ciddii falkaasi ka danbaysay.
Wixii wararkaasi ka soo kordha goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa inshaa allaah.